Digniin culus oo laga soo saaray kullan ka dhacay xarunta madaxtooyadda Soomaaliya (SAWIRO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Digniin culus oo laga soo saaray kullan ka dhacay xarunta madaxtooyadda Soomaaliya (SAWIRO)
Kullan ay habeenkii xalay yeesheen taliyeyaasha nabad-sugidda, booliska, militeriga iyo wasiirka amniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa waxaa lagu soo saaray digniin culus oo ku aadan xasilinta ammaanka magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.
Wasiirka amniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale oo kullankaasi ka hadlay ayaa sheegay in qorshaha xasillinta ammaanka magaalada Muqdisho uu yahay go’aan kasoo baxay golaha fullinta Jamhuriyadda Soomaaliya, loogana gol-leeyhahay in magaalada ay noqoto meel nabad ah.
Sidoo kale, taliyaha ciidamada nabad-sugida C/laahi Maxamed Cali Sanbaloolshe oo isna kullankaasi ka hadlay ayaa sheegay in iska hor’imaadkii shalay ka dhacay degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho aanu aheyn mid u dhaxeeyay ciidamo, balse uu ahaa mid u dhaxeeyay ciidamada xasillinta iyo kooxo burcad ah oo rabay inay dhacaan raashiin, kuwaas oo uu sheegay in markii dambe gacanta lagu dhigay.
Taliyaha ciidamada booliska Jeneraal C/xakiin Daahir Saacid ayaa isna sheegay inay wixii hadda ka dambeeya ay mamnuuc tahay in magaalada gudaheed lagu dhex qaato dharka ciidamada dowladda islamarkaana aan la arki karin askari aan fasax heysan oo qori ku dhex wata magaalada gudaheeda.
Wuxuu Jeneraal Saacid tilmaamay in la sameyn doonno xafiis 48-ka saac soo socda lagu diiwaan geliyo illaalada ay wataan mas’uuliyiinta dowladda, islamarkaana lagu siiyo aqoonsi iyo dhar gaar ah, sidoo kale aan la ogolaan doonin in magaalada ay ku socdaan ciidan aan aheyn kuwa xasillinta ammaanka Muqdisho.
Ugu dambeyntii, taliyaha ciidamada militeriga Soomaaliya Jeneraal Axmed Maxamed Jimcaale Cirfiid oo qodobada kullanka kasoo baxay u aqriyay warbaahinta ayaa dhinaciisa ku baaqay in laga baxo dhamaan guryihii ay lahaayeen ciidamada xoogga dalka, islamarkaana lagu baneeyo illaa 1-bisha July.
Qodobadda kasoo baxay kullankaasi ayaa waxaa ka mid ahaa:-
• Inaan la ogaleyn qof aan ka tirsaneen ciidanka xooga dalka Soomaaliya inuu ku labisto dharka tuutaha oo calaamad u ah ciidamada xooga dalka Soomaaliya.
• Inaan hub ama qori lagu dhex qaadan karin magaalada marka laga reebo ciidanka xasillinta amaanka Muqdisho.
• Gaadiidka xooga dalka Soomaaliyeed waxaa lagu amrey iney qaataan cadeynta dhaqdhaqaaqa gaadiidka, si loo ogaado inuu baabuurkaasi shaqo u socdo.
• In ciidan iyo gaadiid aan wadan warqad fasax ah aan lagu dhex arki karin gudaha magaalada Muqdisho.
• In aan cid loogu turin howlgalada xasillinta ammaanka caasimada iyo hub ka dhigista cidii ka hor timaadana tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadayo.
• In la baneeyo lagana baxo guryaha ay leeyihiin ciidamada xooga dalka ee ku yaalla Muqdisho illaa 1-da July islamarkaana qof shacab ah oo degan guryahaasi aan la arki karin wixii xilligaasi ka dambeeya.